Didy enina tsy maintsy atao alohan'ny fanomezana karatra fandraharahana | Famoronana an-tserasera
Matetika isika dia mahita ny tenantsika ao anaty toe-javatra miavaka iray izay tsy maintsy ananana ny karatry ny fandraharahana. Amin'io fotoana io dia mihaona amin'ny olona iray manan-danja amintsika isika. Tamin'io fotoana io ihany hanombohana resadresaka amin'ity olona ity ary avelao ao anaty fahatsiarovany ny nomeraonao na ny mailakao. Araka izany, amin'ny fotoana tsy ampoizina indrindra, amin'ny alahady tolakandro, mihaino ireo finday mahafantatra fa izy io. Mba tsy ny mifanohitra amin'izany no mitranga dia tsy maintsy mahafantatra didy enina mandefitra izahay hanaterana ny karatrao.
Ireto didy folo ireto dia hahasoa hisarihana ny saina. Tadidio fa raha manome karatra amin'ny napkin ianao dia tsy ho isa fahasoavana. Ilaina ny manolotra karatra fandraharahana amin'ny toe-piainana mety indrindra. Araho izany torohevitra kely.
1 Aza manangona angona azafady
2 Aza be fiaraha-monina
3 Karakarao ny karatrao
4 Aza mamorona mitovy ho an'ny rehetra
5 Hamafiso ny marikao manokana
6 Ny typografia sy ny famakiana mora, ny tolona tsy misy farany
7 Ho original ianao
Aza manangona angona azafady
Mampihetsi-po tokoa ny manamboatra endrika ary, na dia mahita azy io aza dia tadiavinay ny manamboatra azy io bebe kokoa. Izany dia rehefa manao ny tsy mety isika amin'ny fidirana data maro. Anarana, logo, isa, mailaka, sns sns sns. Ary tsy misy toerana akory hijerena ny volavolan'ny karatra.
Mitadiava famintinana tonga lafatra momba ny tenanao na ny orinasanao. Mametraha tsipika fifandraisana iray na roa raha be indrindra. Ary soraty ny anaranao manokana, na, raha ilaina, ny sary famantarana.
Tadidio fa raha misy manana karatra fandraharahana aminao dia azo inoana fa efa nihaona taminao izy ireo ary efa mahalala ny momba azy. Ny karatra dia fampahatsiahivana fotsiny. Aza hadino izany - te-hihazona ny fahatsiarovany azy ireo fotsiny ianao ary hitarika azy ireo mankany amin'ny tranonkalanao, na amin'ny toerana hafa ahitan'izy ireo fampahalalana bebe kokoa.
Aza be fiaraha-monina
Na mitady asa ianao na raha orinasa dia tsy mahaliana olona ny mombamomba anao manokana. Raha mitady fifandraisana, mampiasa tambajotra sosialy hafa toy ny Linkedin. Ny orinasa sy ny mpanjifa hafa dia samy tsy liana amin'izay anananao sakafo maraina. Tsy toy izany koa ny hevitrao momba ny lohahevitra hafa. Afaka manidy varavarana amin'izany ianao. Tadidio fa ny fomba fijery voalohany dia tena zava-dehibe, asehoy ho toy ny filàna fa tsy fahavalo.
Karakarao ny karatrao
Tsy misy ratsy noho ny mpanjifa na ny ho avy mpampiasa noho ny mahazo karatra fandraharahana ketrona sy voaloto izay efa nanananao teny ambanin'ny kitaponao nandritra ny volana maro. Ka tazomy ao anaty boaty nanaterana azy ireo. Mba hitondrana azy ao anaty poketra, tsara kokoa ny kitapom-batsy misokatra na ny paosin'ilay palitao. Farafaharatsiny mandritra ny dianao, raha mbola ao an-trano ianao, dia tazomy amin'ny toerana malalaka.
Aza mamorona mitovy ho an'ny rehetra
Toy ny vita vita amin'ny fandaharam-pianarana, ny orinasa rehetra atrehanao dia tsy te hitovy aminao. Hikaroka mason-tsivana samihafa izy ireo rehefa manakarama olona na mifanakalo varotra amin'ny orinasanao. Ny karatra fandraharahana ho an'ny mpamorona karazana dia tsy tokony hitovy amin'ny karatra fandraharahana ho an'ny mpamorona UX, ohatra. Ary toy izany koa ireo olona te hiditra amin'ny orinasa mpanao lalàna fa tsy ny atrikasa fandrafetana.
Hamafiso ny marikao manokana
Miezaha hanao ny sary famantarana na ny marika ho hany sary eo amin'ny karatry ny orinasa. Raha manonta amin'ny lafiny roa (izay tokony hataonao) ianao, dia tokony ampidiro ny antsipirian'ny fifandraisanao.
Mitovy dika amin'ny marikao ianao ary mila mifandray aminy avy hatrany ny mpanjifanao na ny mpiara-miasa aminao. Aza miala amin'ny marika misy anao amin'ny lafiny rehetra; manahirana fotsiny.
Ny typografia sy ny famakiana mora, ny tolona tsy misy farany
Raha tsy hoe calligrapher ianao dia tsy misy antony hampiasana endri-tsoratra amin'ny karatry ny orinasao. Mety ho tsara tarehy ilay izy, fa raha tsy azonao ny indray mipi-maso fotsiny dia nolavinao fotsiny ny faran'ny karatrao.
Raha fintinina, alao antoka fotsiny fa miseho mazava ny anaranao sy ny antsipirian'ny fifandraisanao. Ary tazomy etsy ambony 8pt ny lahatsoratrao lehibe.
Ho original ianao
Ity angamba no didy lehibe indrindra amin'ny rehetra: ny "aza mamono olona" amin'ny famolavolana karatra fandraharahana. Na inona na inona fanapahan-kevitrao hataonao amin'ny volavolanao dia ataovy ho anao izany. Ataovy am-boalohany ary ataovy tsy hay hadinoina. Na amin'ny alàlan'ny hafatra tsy manam-paharoa anao, ny fandefasana fandinihan-tena na ny famonoana ho faty an-tsokosoko dia ataovy izay hahatsiarovan'ny mpanjifanao anao ary alao antoka fa tsy hatsipy ao anaty kitapo ny karanao mba haverina averina enim-bolana aty aoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Didy enina tsy maintsy atao alohan'ny fanolorana karatra fandraharahana
Ny fironana Netflix dia tonga amin'ny lalao video miaraka amin'i Utomik
Fisafidianana lohahevitra WordPress maimaimpoana 10 maimaimpoana